Ampidiro VirtualBox 5.2.8 amin'ny Ubuntu 17.10 | Ubunlog
Ampidiro VirtualBox 5.2.8 amin'ny Ubuntu 17.10
VirtualBox dia fitaovana virtoaly miampita sehatra malaza, izay ahafahantsika manao virtoaly ny rafitra fiasa (vahiny) amin'ny rafitra fiasanay (mpampiantrano). Miaraka amin'ny fanampian'ny VirtualBox manana ny fahaizana mitsapa OS izahay nefa tsy mila manavao ireo fitaovantsika.
Anisan'ireo rafitra miasa izay tohanan'ny VirtualBox ny GNU / Linux, Mac OS X, OS / 2, Windows, Solaris, FreeBSD, MS-DOS, ary maro hafa. Izay ahafahantsika mitsapa ny rafitra samihafa, fa tsy izany azontsika atao koa ny manararaotra ny virtualization mba hitsapana ny fitaovana sy ny fampiharana amin'ny rafitra hafa noho ny antsika.
ankehitriny VirtualBox dia ao amin'ny kinova farany 5.2.8, mitondra fanatsarana marobe nahita fanohanana mivantana ny kernel Linux 4.15 izahay. Angamba ny sasany amin'ireo mahaliana indrindra dia ny fanitsiana ilaina efa natao ho an'ireo safidy 3D izay niteraka bibikely isan-karazany.
Ho an'ny Linux, fanatsarana maro no efa nambolena, toy ilay naneho hevitra momba ny fanohanan'ny Kernel farany teo nanamboatra ny bug ihany koa izay nanao ny varavarankely VirtualBox Hanova habe ho azy izy io rehefa manova ny haben'ny efijery ianao.
Nahita fanitsiana maro koa izahay tamin'ny audio sy video an'ny ireto fanatsarana hafa hitantsika ao amin'ny virtualbox ireto dia ireto:
Ny fanovana sy fanatsarana miavaka hafa izay tafiditra ao amin'ny famoahana Virtualbox 5.2.8 dia ahitana:
Fanohanana ny asan'ny FSGSBASE, PCID, INVPCID CPU ho an'ny vahiny
Nihatsara ny fanovana haben'ny fikandrana mandeha ho azy amin'ny fisehoan'ny HiDPI
Vahaolana ho an'ny famerenam-bidy maoderina
Raikitra ny fianjerana rehefa manokatra Wizard Machine Vaovao.
Nanampy fanohanana amin'ny fanavahana ireo loharanom-peo firaketana ao amin'ny mixer PulseAudio amin'ny mpampiantrano rehefa mihodina milina virtoaly marobe.
Fitehirizam-boky: fihoarana ny data angona fangatahana sasany ho an'ny kapila DVD / CD mifandray amin'ny mpanara-maso AHCI.
Fitehirizam-boky: Sary VMDK tantanina namboarina noforonin'i Amazon EC2 VM Export
Tambajotra: ny famerenana boot PXE miorina amin'ny e1000
Tambajotra - nanampy vahaolana ho an'ireo vahiny efa zokinjokiny izay tsy mamela ny fonenan'ny bus ho an'ny fitaovana virtio PCI
Fanatsarana backend DirectSound
Fanohanana mitady rakitra tsara indrindra ho an'ireo rakitra voarakitra ao amin'ny Firefox
HDA fanahafana ny vahiny Windows
Amboary ny efijery mainty rehefa avela ho an'ny vahiny Linux ny 3D
Sakano ny setuid, setgid amin'ny lahatahiry zaraina amin'ny vahiny Linux
Ahoana ny fametrahana VirtualBox 5.2.8 amin'ny Ubuntu?
Raha efa manana kinova ianao an'ity rindrambaiko napetraka ao amin'ny solosainao ity ary te hanavao ity kinova ity ianao Manoro hevitra anao aho mba hialanao ilay tokony hialanao amin'ny olana, noho izany dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Manomboka mametraka ilay kinova vaovao izahay izao, manohy amin'ny terminal izahay ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto:
Voalohany dia tsy maintsy ampidirintsika ny tahiry ao amin'ny loharano.list
Manohy manafatra ny lakilem-bahoaka izahay izao:
Ampianay amin'ny rafitra izany:
Manohy manavao ny lisitry ny tahiry izahay izao:
Zava-dehibe tokoa ny fananana ireto manaraka ireto, mba hanomezanay antoka ny fiasan'ny VirtualBox:
Ary farany dia miroso amin'ny fametrahana ny rindranasa amin'ny rafitray izahay:
Ankehitriny mba hanamarinana fa vita ny fametrahana:
Ho dingana fanampiny afaka manatsara ny fiasan'ny VirtualBox isika Miaraka amin'ny fanampian'ny fonosana iray, ity fonosana ity dia ahafahan'ny VRDP (Virtual Remote Desktop Protocol), mamaha ny olana amin'ny vahaolana kely izay tantanan'ny VirtualBox, ary ny fanatsarana maro hafa.
Mba hametrahana azy dia alefaso ireto baiko manaraka ireto:
Manaiky ny fepetra sy fepetra izahay ary mametraka ny fonosana.
Hanamarina fa napetraka tsara izy:
Ary izany no izy, efa manana VirtualBox napetraka ao amin'ny rafitray izahay, mila mandeha any amin'ny menio fisoratana anarana fotsiny ianao ary mampandeha azy. Ankehitriny dia mitoetra ho anao ihany ny manararaotra ireo tombontsoa atolotry ity programa lehibe ity ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Ampidiro VirtualBox 5.2.8 amin'ny Ubuntu 17.10
Izaho dia manana Windows XP napetraka ao amin'ny solosainako. Nieritreritra ny hametraka Linux OS amin'ny fizarazarana hafa na kapila mafy aho. Raha apetrakao eo ambanin'ny Linux ny boaty virtoaly. Mila mametraka indray ny Window XP ve aho sa azoko atao amin'ny fampiasana partition na hard drive ilay efa misy? Ny zavatra tsy tadiaviko dia ny famerenako ireo programa rehetra izay mandeha eo ambanin'ny XP.
Inona ny Ubuntu sy boaty virtoaly amporisihinao?
Hatsarao ny mari-pamantarana ny tamba-jotra tsy misy tariby miaraka amin'ity toro-hevitra manaraka ity
Dropbox, mampiantrano ary zarao maimaim-poana ireo rakitrao